What is Fintech? | KyoPay
အခုဒီဂျစ်တယ်လောကမှာ Fintech ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတာလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်!
Fintech ဆိုတာကတော့ Financial (ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သော) နှင့် Technology (နည်းပညာ) ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနစ်လုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Fintech ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရရင်တော့ ငွေကြေးနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို နည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ Consumer တွေဆီသို့ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Fintech ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတော့ လူအများကြား အတော်အသင့် စိမ်းနေ လောက်ပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော ေငွကြေးနည်းပညာဆိုတာကတော့ လုံး၀ အသစ်အဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေကပဲ Finance Industry ဆိုတာကြီးကိုပြောင်းလဲမှု အသစ်သစ်တွေ ဖန်တီးပေးနေတာပါ။ တိုးတက်လာတဲ့ အင်တာနက်ခေတ်နှင့် ကျွန်ပ်တို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လက်ရှိသုံးနေကျတဲ့ Smartphones၊ Tablet တွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းကလည်းထိုကဲ့သို့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်ပိုမိုမြင့်စေခဲ့ပါတယ်။
(၁) Mobile Banking
Mobile Banking ဆိုတာကတော့ မိမိ Computer နှင့် အဝေးသို့ရောက်နေစဉ် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး (သို့) Cellular Device ဖြင့် Online Banking လုပ်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ - မိမိဘဏ်အကောင့်မှ balance များကို စောင့်ကြည့်မှတ်သားခြင်း ၊ ဘဏ်အကောင့်အချင်းချင်း ငွေလွဲှပြောင်းပေးခြင်း ၊ ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ATM စက် များ၏တည်နေရာတို့ကို ရှာဖွေခြင်း) တို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ပ်တို့ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ဘဏ်ကို လူ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်စရာမလိုပဲ နေအိမ်ကနေ ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်နိုင်ပါပြီ။ ထိုအကောင့်ကိုလည်း Smartphone များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ ငွေလွဲှပြောင်းခြင်းများ၊ငွေလွဲှပြောင်းမှုကို စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိင်သည့်အပြင် သင့် ဖုန်းကိုလည်း ဒီဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုအနေသို့ပြောင်းလဲကာ အွန်လိုင်းပေါ်မှ သင်အလိုရှိတာတွေကို အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိင်ပါပြီ။
(၂) Invoice Discounting
ယခုခေတ် SME လုပ်ငန်းလေးတွေမှာအဓိက ပြသနာဖြစ်တာကတော့ လုပ်ငန်းအတွက်ငွေလည်ပတ်မှုပါပဲ။ မိမိက Supplier
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနှင့် လုပ်ငန်းကြီးများသို့ ဝန်ဆောင်မှု (သို့) ကုန်ပစ္စည်း ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုပါစို့။ မိမိ အနေနှင့် ထိုဝန်ဆောင်မှု (သို့) ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကျသင့်ငွေကို ရရှိရန် ဥပမာအားဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်လ သို့မဟုတ် နှစ်လကျော် ကြာတတ်ပါတယ်။ ထိုအခါ မိမိ ကုမ္ပဏီဘက်မှာ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ငွေမလုံလောက်တာတွေ၊ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ် အတွက်ငွေလည်ပတ်ရန်အခက် အခဲရှိလာနိင်ပါပြီ။ Invoice Discounting က အဲ့လိုပြသနာတွေကို အဓိကဖြေရှင်းပေးနိင်တဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပါ။ မိမိရစရာရှိတဲ့ေ ‌ငွေတွေ (Invoice တွေကို) ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ နိင်ငံအတွင်း တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Fintech ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ Platform တစ်ခုမှာ Discount ပမာဏတစ်ခုနှင့် ရောင်းချပြီး ငွေကို တစ်ပတ်လောက်အတွင်း ပြန်ပေါ်စေပါတယ်။ Invoice Discount ဖြင့်ရောင်းချခြင်းများအကြောင်းကပိုမိုသိရှိလိုပါ http://www.kyopay.com.mm/ တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိင် ပါတယ်။
Cryptocurrency ဆိုတာကတော့ ယနေ့ခေတ်တွင် အတော်အသင့်အရေးပါသော ငွေပေးချေရာတွင် အသုံးပြုနိင်သည့် နည်းလမ်း သစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေများလွဲှပြောင်းရာတွင် ပိုမို လုံခြုံမှုရှိစေကာ ငွေလွဲှပြောင်းခြင်းတွင် ကြားခံနယ်တစ်ခုအနေနှင့် ရှိနေသော ဘဏ် များ၏ အခန်းကဏ္ဍများကို မပါဝင်စေနိင်တော့ပါ။ Cryptocurreny ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲက Security (လုံခြုံရေး) ကိုေ တာ့ Blockchain Technology ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ မြန်မာနိင်ငံမှာတော့ Cryptocurreny ကိုအသုံးပြုသူ မရှိသလော က်နည်းပါးနေပင်မဲ့ အမေရိကန်၊ ဆွီဒင်၊ နယ်သာလန်၊ ကနေဒါ၊ ယူကေ အစရှိသော အနောက်နိုင်ငံများတွင် တွင်ကျယ် စွာ သုံးနေကြပြီ ဖြစ်သည်။
Invoice Discounting နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား? http://www.kyopay.com.mm ကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိင်ပါသည်။